I-Urban Hut Retreat (Inhliziyo ye-Downtown SD!) - I-Airbnb
I-Urban Hut Retreat (Inhliziyo ye-Downtown SD!)
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Nick
Indawo yokuphumula ethokomele yasedolobheni enkabeni yeDowntown San Diego ikulindile! Okujabulisayo kwe-East Village kanye nobunzulu bedolobha lase-San Diego Gaslamp khona kanye emnyango! Hamba uye e-Petco Park Stadium, isikhungo sokuhlangana, & izindawo zokuheha & izindawo zokudlela ezihamba phambili ze-SD emizuzwini engu-! Uma ungekho ngaphandle kokuhlola, phumula ngamarekhodi akudala kumdlali wamarekhodi akudala noma uphumule kuvulandi omkhulu ovulekile! Yakha izinkumbulo ezizohlala phakade, lapha, enhliziyweni yakho konke!
(Leli fulethi lihlanzwe yisevisi yokuhlanza yobuchwepheshe eqeqeshelwe ukusebenzisa izindlela ezifanele zokubulala amagciwane!)
Isitayela esithokomele sezimboni sefulethi elinekamelo lokulala elilodwa, elinekhishi eligcwele & i-balcony evulekile! Indawo ingathatha izivakashi ezingu-1-2 ngokunethezeka! Ilungele abantu ababili abasebenzela kude noma ukushaywa wumoya! Uma ungahloli, buyela ekhaya ukuze uphumule futhi uphile impilo emnandi kule ndawo yokuphumula yasedolobheni!
Leli fulethi elinekamelo lokulala elilodwa liza namapulangwe afana nezindawo zaphansi, izinto zikagesi eziyinsimbi engagqwali ekhishini, indlu yokugezela ephelele, nezinye izici eziningi zezinga eliphezulu nezici ezicatshangelwe kahle!
Le ndawo yokuhlala iphinde inikeze indawo eyodwa yokupaka yamahhala egalaji elimboziwe!
I-Quaint, Ithokomele futhi ithokomele.
I-Smart 55 inch TV. Finyelela i-Netflix, i-Youtube, i-Espn njll.
Isistimu Yemidlalo ye-Nintendo (dlala amaklasikhi afana ne-Super Smash Bros & amp; Kart!)
Umdlali wamarekhodi - Lalela amaklasikhi athile ngenkathi uthola ikhofi lakho lasekuseni noma itiye konke kupholile nge-blankie
Usofa/Umatilasi womoya ohlinzekelwe izinto zombhede ezengeziwe
Itafula lokudlela labantu abangu-2
ukuhlala/Ideski elimile - Kulungele ukusebenza usekhaya
Indlu yangasese egcwele
ye-closet Ibhalkhoni enkulu evulekile ukuze uphumule futhi uthathe umoya wase-San Diego!
konke namabhodwe namapani, ukudla okulula, ikhofi, itiye nakho konke ongakudinga ukuze uhlale ngokunethezeka!
Indawo eyodwa yamahhala yokupaka!
Yokuzivocavoca UKUHLOBISA/UKWAKHEKA kweDolobha
elisophahleni Imidwebo eminingi oyibonayo kuyo yonke ivela kumaciko endawo/abathwebuli bezithombe khona lapha e-San Diego! Sekela umculi wendawo/ibhizinisi!
~ Mi Casa su Casa! Jabulela!
Isifunda esike saba yindawo yokugcina izimpahla, i-East Village manje iyindawo eshesha kakhulu e-San Diego. Le ndawo ezungeze idolobha elikhulu igcwele ukuphila ngamabha asophahleni, izindawo zokudlela eziphezulu, i-Baseball Stadium edumile, izindawo zokwenza utshwala nobuciko, khona kanye emnyango! Hamba uye Esifundeni esidumile se-Gasilamp emizuzwini engu- ukuze uzijabulise ebusuku noma uthathe uhambo ezindaweni ezithandwayo ze-SD ezifana ne-USS Midway, i-Seaport Village, isikhungo sokuhlangana nokuningi! Le ndawo yedolobha iyipharadesi labantu abahamba ngezinyawo.
Futhi, itholakala ezindaweni ezithandwayo ze-SD kuhlanganise ne-Little Italy (ukugibela imizuzu engu-5), amabhishi athandwayo e-San Diego ahlanganisa isiqhingi se-coronado/ibhishi lomsebenzi/ulwandle (ukuhamba ngemizuzu engu-15), kanye ne-San Diego Zoo/i-Balboa Park (ukuhamba ngemizuzu engu-10!) Phila njengomuntu wendawo enhliziyweni yakho konke! Ujabulele ukubungaza
- Ukuhambahamba imizuzu engu-5 ukuya e-Petco Park Padre Stadium
- Ukuhambahamba imizuzu engu-5 ukuya Esifundeni esidumile
se-GasLamp - Ukuhambahamba imizuzu engu-10 uya Esikhungweni Somhlangano
- Izindawo zokudlela ezihamba phambili, amathilomu, amagalari obuciko, izitolo zekhofi, ukuthenga, ukuzijabulisa, izindawo zokwenza utshwala, izindawo zokuheha ze-SD zisemnyango!
- Ukugibela i-Uber imizuzu engu-5 ukuya e-Little Italy, e-San Diego (i-Italian Village yesimanje enokudla okuhamba phambili!)
- imizuzu engu-15 yokuhamba ngemoto ukuya emabhishi aphezulu we-SD, i-zoo, umhlaba wolwandle, njll!
Ngiyabuhlonipha ubumfihlo bezivakashi zami kodwa ngizotholakala ngazo zonke izikhathi ukuze ngiphendule noma yimiphi imibuzo phakathi nohambo lwakho! Izivakashi zami ziyizinto eziza kuqala kimi!